နားဦးတည့်ရာ ရှစ် – Lay Phyu (Father) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Music » နားဦးတည့်ရာ ရှစ် – Lay Phyu (Father)
နားဦးတည့်ရာ ရှစ် – Lay Phyu (Father)
Posted by မြစပဲရိုး on Feb 13, 2015 in Music | 14 comments
ဒီတစ်ခါ နားဦးထဲကို တည့်တည့် ကြီး တိုးဝင်ပြီး အလှည့်ရောက်လာတာက လေးဖြူ ရဲ့ “အဖေ”။
ဘယ်သူရေးတယ် ဆိုတာ မသိတာမို့ ရေးစပ်သူ ကို သိရင် မျှပေးကြပါဦး။
ဗီစီဒီ ထုတ်ချိန် ဆင်ဆာ မကျ တာမို့ ထုတ်ခွင့်မရခဲ့တဲ့ သီချင်းလေး လို့ နားလည်မိတာ။
၂၀၁၄ က လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒီချုပ် ရန်ပုံငွေပွဲမှာ လေးဖြူ က ဒီ သီချင်း နဲ့ ဖွင့်ခဲ့ သတဲ့။
. နောက်ခံ ကတော့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း ရဲ့ ပုံရိပ်တွေ နဲ့။
သီချင်း ကို နားထောင်ရင်း မျက်ရည် ဝဲ ပါတယ်။
ဒီလို လူ ကို တိုင်းပြည် အတွက် စိတ်ကြိုက် မသုံးခဲ့ရဘူး။
ကိုယ်ကျိုး အတွက် အတ္တစိတ် မရှိဘဲ တိုင်းသူ ပြည်သား တွေ ကို ရုပ်အားရော စိတ်အားမှာပါ ကြီးပွါးစေချင်ခဲ့တဲ့ လူ တစ်ယောက် ရဲ့ မှတ်ကျောက် ဟာ မြဲလှတယ်။
လူ ကို မမြင်ဘူး ဘဲ နဲ့ သူ့ စကားတွေ သူပုံရိပ် တွေ ဟာ ကျွန်မ တို့ ကို ဘာလို့ ဒီလောက်တောင် လွှမ်းထားနိုင်တာလဲ။
အကြောင်းမဲ့ တော့ မဟုတ်ဘူး။
သူ့ရဲ့ ရိုးသားခြင်း၊ ကြိုးစားခြင်း၊ ဖြောင့်မှန်ခြင်း၊ စေတနာမှန်ခြင်း၊ ကိုယ်ကျိုးမရှာခြင်း
ဒီ အကြောင်း တွေ က ဘဲ ကျွန်မတို့ ရဲ့ နှလုံးသားမှာ သူရဲကောင်း ဖြစ်နေစေခဲ့တာပါ။
လူတစ်ယောက် ရဲ့ စကားတွေ က ကိုယ့်ဘဝ ကို လွှမ်းမိုး စေသလား မေးရင် “ဟုတ်ကဲ့” လို့ ဖြေပါမယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကို လေးစားလွန်း တဲ့ ကျွန်မ မိဘ တွေ က သူ့ ပုံကားကြီး က အိမ်ရှေ့ ဧည့်ခန်းထဲ မှာ ချိတ်ထားတာ။
သူ့အကြောင်း စာအုပ်တွေ ကိုလဲ အားကျစရာ လူတစ်ယောက် အဖြစ် သူတို့ သားသမီး တွေ ကို ဖတ်စေခဲ့ တာ။
အဲဒီကနေ သူ ဟာ ကျွန်မ ရဲ့ Role Model ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့ စကား တွေ ထဲ မှာ ကျွန်မ အကြိုက်ဆုံး တွေက
ဘယ်ကိစ္စမဆို လုပ်ရင်မှားတယ် မှန်တယ် ဆိုတာ ရာဇဝင်က ဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်။”
(၁၉၄၇ ခု၊ ဖေဖဝါရီလ ၂၈ရက်၊ မြို့မိမြို့ဖ များမှဂုဏ်ပြုသည့် ဧည့်ခံပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းမှ)
(ဇူလိုင်လ ၁၃ရက်၊ မြို့တော်ခန်းမကြီး၌ ပြောကြားခဲ့သော နောက်ဆုံးမိန့်ခွန်းမှ)
ထပ်ပြီး ဖတ်ချင်ရင် သူ့ မိန့်ခွန်း ကောက်နှုတ်ချက် တွေ ၊ မိန့်ခွန်း ရှည် တွေ၊ သူ့ ပုံ တစ်ချို့ တွေ ကို စုစည်း ထား တဲ့ “aungsan.com” ဆိုတဲ့ website တစ်ခု ကို ညွှန်းပါရစေ။
အဲဒီထဲက ကြယ်လေး နဲ့ “Quotes” ဆိုတဲ့ အထဲ မှာ မိန့်ခွန်း ကောက်နှုတ်ချက် အတို လေး တွေ ကို ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
“Time Line” ထဲ မှာ လဲ သူ့ ရဲ့ သမိုင်းကြောင်း အတိုချုပ် ကို ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေး တွေ ကို မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာကြီး အောင်ဆန်း ရဲ့ စိတ်ဓာတ် နဲ့ သူ့ ဘဝ ကြောင်း ကို သိ အောင် အမြန်ဖတ်လို့ ရနိုင်တဲ့ နေရာ လေး မို့ မျှ လိုက်ပါတယ်။
အဖေ – လေးဖြူ
အဖေ နင်းဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဘဝရဲ့ ဆူးတော အပြည့်နဲ့ လမ်းထဲ
အဖေ ပေးသွားခဲ့တဲ့ မြေပုံ လမ်းပြ ကွန်းပတ်စ်လေးနဲ့
. တောနက်ထဲ ကျွန်တော်ရောက်နေပြီ အဖေ
သင်ကြားသွားခဲ့တဲ့ အဖေရဲ့ စကား သင်ခန်းစာများနဲ့
အဖေ မရှိတော့တဲ့ နောက်မှ အထပ်ထပ် တွေးခေါ်ရင်း နဲ့
အခွင့်ရှိသေးရင် ကြားချင်တယ် အဖေ
အိုး – အဖေမရှိတော့တဲ့နောက်
အိုး – လူလားမြောက်တဲ့နောက်
သုညဘဝ က စလို့
ရင်ကော့ ခေါင်းမော့လို့ သေမလောက်ဆိုးတဲ့ လောကဓံတရားလည်း
. ဖြေရှင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ အဖေ့ရဲ့ သတ္တိမျိုး ကျွန်တော်ရှိချင်တယ် အဖေ
အမှောင်ကိုခွင်းမဲ့ လမ်းပြမီး နဲ့
အဖေ အိမ်မက်ခဲ့တဲ့ အနာဂါတ် လောက အကျိုးသယ်ပိုး မယ်
ကျွန်တော့ ကိုယ်ထဲ လှည့်ပါတ်
အဖေ့ရဲ့ သွေးတွေ ရဲပါတယ် အဖေ
လှိုင်းထန်လေထဲ မျှောတဲ့ အခါ
အမြဲမြင်ယောင် တမ်းတ မိတယ် အဖေ
ဘဝ ဒါဏ်ချက်များ အိမ်မက်မှာ
မျက်ရည်တွေ စို့ရတဲ့ အခါ
တစ်ခြားသူမရှိဘူး ကျွန်တော့ အတွေးမှာ
(နှစ် တစ်ရာ တိုင် ဘယ်လောက် သတ်သတ် မသေသော သူရဲကောင်းကြီး သို့)
ပညာ​ရေးက အ​ရေးကြီးတယ်​လို့လည်း ​ပြောသွား​သေးတယ်​ ​လေးဖြူက
12 ရက်​​နေ့ကတကယ်​​တော့ ဆုံးသွားတဲ့ ဦးကြီးရဲ့ ၂၈ နှစ်​​မြောက်​ မင်္ဂလာနှစ်​ပတ်​လည်​ ပြီးခဲ့တဲ့ ၉ ရက်​က သူဆုံးတာ ၁၀ လပြည့်​တာ
၁၃ ရက်​​နေ့က​တော့ အားလုံးရဲ့ ဖခင်​ကြီး​မွေး​နေ့
ဟုတ်​တာ​ပေါ့ အ​ဖေမရှိ​တော့တဲ့အိမ်​မှာ ဒုက္ခ​တွေဝိုင်းလာခဲ့တာ
ကိုယ်​အသုံးမကျတာ​တွေအတွက်​ ခွင့်​လွှတ်​ပါလို့​တောင်​ မ​ပြောဝံ့ပါဘူး
လေးးးဖြူ မှာ အဖေ သီချင်းးး ၂ ပုဒ် ရှိတယ် ထင်တယ်…
လိပ်ပြာ အယ်လ်ဘမ် မှာ တစ်ပုဒ်ရှိတယ်
ကျနော်တို့ စီနီယာတွေတော့ နတ်မောက်ရောက်နေကြပြီ…
အဖေ မွေးးနေ့ ဟာ….
ဗမာပြည် ရဲ့ မွေးးးနေ့ ပါ…
နှင်းဆီအငြိမ့် မှာ ဗိုလ်ချုပ် ရုပ်ရှင် နမူနာ အပိုင်းလေး
နှစ်တိုင်း ဒီလိုပဲ သွေးပူနေကြစေချင်မိပါတယ်…။
ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ တစ်ခုခုကို ပြောပါဆိုရင်တော့…၊
လွတ်လပ်ရေးကြီးကို အသက်ပေးပြီး ယူခဲ့တာကိုလည်း ခဏမေ့ချင်မေ့ထားလိုက်ပါဦး…။
တပ်မတော်ရဲ့ ဖခင် အစစ်အမှန်ကြီး ဆိုတာကိုလည်း မေ့ချင်မေ့ထားလိုက်ပါဦး…။
ခေါင်းဆောင်ပေးနိုင်မယ့် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို
ကျေးဇူး အထူးတင်ဖို့ ကောင်းနေပါပြီဗျာ…။
အစ်မရေ…။ လေးဖြူရဲ့ အဖေ သီချင်း နဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း မသိသေးတဲ့ အကြောင်းအရာမို့
ပကာသနိယကံပြုတာခံရတဲ့.. ရှင်ဥက္ကဌနဲ့.. ရှင်အာဒိစ္စ၀ံသတို့အပေါ်… ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဘယ်လိုမြင်ခဲ့သလည်း.. လေ့လာကြည့်သင့်လှတယ်…။
တကယ်တော့.. “လူသေလူဖြစ်ဝါဒ”ရဲ့..ရှင်ဥက္ကဌကို.. “ရဲသော်မသော် -သေသော်ငရဲမလား”၀ါဒဖြန့်စာရေးစေခဲ့တာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဖြစ်သလို…
“ဘာသာရေးသည်ဘိန်း” မတ်စ်ရဲ့စကား(“Religion is the opium of the people” – Karl Marx)ကိုဘာသာပြန် ပြောဟောတဲ့… သခင်သန်းထွန်းနဲ့မယားညီအကို…
နောက်… ထေရာဝါဒဘာသာရေးကိုမလိုလားတဲ့.. ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုတည်ထောင်သူတဦးဟာလည်း.. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပဲ…။
ခု အရီးပြောလို့ ပြန်နားထောင်ဦးမယ်
.အရီးမုတ်ဆိတ် ဖတ်ရအောင် ဖွဘုတ်တော်ကြီးက မလာတယ်
(‪#‎ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း‬ မွေးနေ့အား မုဒိတာမပွားနိုင်သူ
လူ့ ဗာလ ဒပဲ့ငါးကောင်နဲ့ အပေါင်းအပါများ ရွတ်ဆိုနိုင်ဖို့ရာ)…
ကဲကဲ…ခင်ညတို့လဲ ခင်ညတို့ အဘအတွက်
ကဗျာလေး စာလေးနဲ့ ဂုဏ်ပြုချင်မှာပဲ…ဒါပေမယ့်…
စာလေးရှာကြည့်တာ ဘယ်မှာမှ မတွေ့ဘူး….ဗျာ
ဘယ်ရှိမလဲဗျာ ခင်ညတို့ အဘလက် ချက်ကြောင့် တစ်နိုင်ငံလုံး
လည်း မဟာယောယုဝငရဲအလား ထင်မှတ်ရအောင်
ခင်ညတို့ လူဗလာများအတွက် ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်တော့..
ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်ဟာ
ဦးလေးမြင့် သား ကျက်သတုံး
လူသတ် ပြည်ဖျက် လမ်းစဉ်များ
.ကိုယ်မရေးတတ်တော့ သူများရေးထားတာပဲ မလာရတယ်ဗျာ
#‎လူ‬ ‘အ’ ကြီး#
ခင်ဗျားကြီးကလေ ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီး ဘာလို့ပဲပြုတ်နဲ့နံပြား ကြိုက်ရတာတုန်းဗျာ … ဒီခေတ်ဗိုလ်ချုပ်တွေလို ဘလူးတွေ ဘလတ်တွေ ကြိုက်ခဲ့ပါတော့လား … အဲ့ဒါမှ ခင်ဗျားအကြောင်း ဟောတဲ့ပြောတဲ့သူတွေကို ဘလူး ဘလက် လေးနဲ့ဧည့် ခံကြမှာပေါ့ … ခုတော့ ဘယ်သွားသွား သူတို့ခမျာ ပဲပြုတ်နဲ့နံပြားပဲ စားနေရတယ် …
ခင်ဗျားကြီးကလေ ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက် ဖြစ်နေပြီး လမ်းဘေးမှာ အကြော်ဝင် စားရသလားဗျာ … ဒီခေတ်ဗိုလ်ချုပ်တွေလို ဟိုတယ်မှာ တက်ပြီး စားပါတော့လား … ခုတော့ ခင်ဗျား စားခဲ့တဲ့အကြော်တွေ ကြွေးနေကြတယ်ဗျ …
ခင်ဗျားဗျာ ဖဆပလ ဥက္ကဋ္ဌ အိမ်သွားတုန်းက သင်္ဘောဆက်သွား မရလို့ဆိုတာကို လာကြိုတာတောင် မစောင့်ပဲနဲ့ ဘာလို့ ဇွတ်ဆင်းပြီး ခြေလျင် လျှောက်သွားရတာတုန်းဗျာ ဒီခေတ်ကလူတွေကတော့ ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်တောင် ကားနဲ့တက်ကြတာဗျ ခင်ဗျားကြီး အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ဘက်စ်ကား စီးရတာတောင် မသတီတော့ဘူး လေဗျာ …
ဖဆပလ ဥက္ကဋ္ဌအိမ်ရောက်တော့ ခြံစောင့်အဆင့်လောက်ရှိတဲ့လူက ထိုင်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာ ဘာကိစ္စ ထိုင်ရတာတုန်း … ပြီးတော့ဗိုက်ဆာလွန်းလို့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ စားစရာလေးများရမလားဗျာ တဲ့ တောင်းစားတာ … ဟိုလူက သနားလို့ ချကျွေးတဲ့ ကောက်ညှင်းပေါင်းကို ပလုတ်ပလောင်းစား ရေလေးသောက်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်ပြန်ထိုင်နေတာ … ဥက္ကဋ္ဌရောက်လာမှ ခင်ဗျားကြီးကို နှုတ်ဆက်လို့ ဟိုလူက ဗိုလ်ချုပ်မှန်း သိပြီး ကြောက်တာမှတုန်လို့လေ … ဒီခေတ်ဗိုလ်ချုပ်တွေလို ငါ့မသ်ိရကောင်းလား ဆိုပြီးတော့ စစ်ဖိနပ်နဲ့ကန် သေနတ်ဒင်တွေနဲ့ ထုပါတော့လား … ခင်ဗျားကြီးအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ထိုင်ခုံမှာထိုင်ဖို့ တောင်မှ စိတ်မသန့်ဘူး ဗျ…
ခင်ဗျားကြီးဗျာ ကိုယ့်ကိုလိုတာရှိ သုံးရအောင်လာလှူတဲ့ရွှေဒင်္ဂါးတွေကိုများ ထားခဲ့ မနက်ဖြန် ဖဆပလ အဖွဲ့ကြီးဆီကျုပ်ပေးလိုက်ပါ့မယ်တဲ့ … ခင်ဗျားကြီး အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တော့ ဒီခေတ်လူကြီးတွေက ၃ သိန်းထက်ပိုမယူရဲကြတော့ဘူးလေဗျာ …
ခင်ဗျားချစ်လှပါပြီဆိုတဲ့ ခင်ဗျား မိန်းမ ဒေါ်ခင်ကြည်ကို ရဲဘော်လေးတွေက ဈေးချင်းတောင်းလေးကူဆွဲပေးတာကို ဘာလို့ဆူရတာတုံး … ဘာတဲ့ သူတို့ကိုဈေးချင်းမဆွဲခိုင်းပါနဲ့ကွာ … သူတို့တွေက နိုင်ငံတော်အတွက်ကွ တဲ့ … ဒီခေတ်မှာလေ လက်အောက်ငယ်သားတွေကို အကုန်လုပ်ခိုင်းတာဗျ … အတွင်းခံတောင်လျှော်ခိုင်းတာ သိလား … ခင်ဗျားကြီးက အဲ့လိုပြောခဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ သူများကိုအနိုင်ကျင့်ရမှာမရဲတော့ဘူးဗျ …
အိမ်ကိုဆန်လေးဆီလေး လာကန်တော့လို့ လက်ခံရင် မင်းအရင်ဆုံး ထောင်ထဲဝင်ရမယ်လို့ ပြောတယ်ဆိုဗျ ခင်ဗျား အပါးတော်မြဲကို … အဲဒီတုန်းကခင်ဗျား စားနေရတဲ့ထမင်းက ရဲဘော်တွေတောင်မစားနိုင်တဲ့ ထမင်းတွေလေဗျာ … ခင်များကြီးအဲ့ လိုလုပ်ခဲ့တော့ ဒီခေတ်လူကြီးတွေ လည်း သူတို့ကိုယ်တိုင်မယူရဲကြတော့ ဘူးပေါ့ဗျာ … အိမ်ကမိန်းမဆီ ပို့လိုက်လို့ပဲ ပြောကြတော့တာဗျ …
ကျွန်တော်ဆက်မပြောပါရစေနဲ့တော့ ဗျာ … ခင်ဗျားလုပ်ခဲ့သမျှတွေအားလုံးက ကျွန်တော်တို့ရင်ကို ကိုင်လှုပ်ဆွဲယမ်း ပရမ်းပတာ ဖြစ်အောင်လုပ်သွားတာတွေ ချည်းပဲ … ကျွန်တော် ခင်ဗျားကြီးကို မသိဘူး မမှီလိုက်ဘူး … ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားကြီးက ကျွန်တော့် နှလုံးသားထဲမှာဘာကိစ္စနဲ့များ နေရာများများ ယူထားရတာတုန်းဗျာ … ခင်ဗျားကြီး မွေးနေ့နီးလာတိုင်း … ဇူလိုင် ၁၉ ရောက်တိုင်း ခင်ဗျား ကြီးကျွန်တော့် ကိုအရမ်းနှိပ်စက်တယ် …
တော်ပြီဗျာ … ဆက်မရေးတော့ဘူး … ကျွန်တော် ထပ်မငိုချင်တော့လို့ပါ …
သူ…မရှိတော့ပေမယ့်…သူ့နီးနီး မျှော်လင့်ယုံစားနိုင်လောက်တဲ့… သူ့…သမီးလေးကို
ရှိနေတဲ့ သူမကို… ဝိုင်းကြရံကြဖို့ကလည်းတစ်ဖက်ပေါ့….လို့…
“မင်းတို့ကောင်တွေ အလကား စာအုပ်ကလေး နှစ်အုပ်သုံးအုပ်ဖတ်ပြီး စကားများနေကြတယ်၊ ကဲ ငါမေးပါ့မယ်။ (What is Revolution) ကဲဖြေကြစမ်း…”
“ရဲဘော်တွေမေးရင် တစ်မျိုးရမယ်၊ ဆိုရှယ်လစ်ကိုမေးရင် အဖြေတစ်မျိုး ရမယ်၊ အဲဒီတော့ ဒီ ‘တော်လှန်ရေး’ ရဲ့ အယူအဆကိုတောင်မှ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး တူညီအောင် မညှိနှိုင်းနိုင်သေး၊ မစုစည်းနိုင်သေးဘဲနဲ့ ဘာလို့ ဖင်ခေါင်းကျယ်ချင်ရတာလဲ။ အချင်းချင်းလည်း တည့်အောင် ဘယ်တော့မျှ မနေကြဘူး၊ မင်းတို့ မညီညွတ်ရင် ‘အားလုံး ဖင်စုတ်သွားမယ်’ သိရဲ့လား။
“မင်းတို့တတွေ မညီညွတ်ရင် ဘာတွေ ဖြစ်ကုန်မယ်ဆိုတာ သိရဲ့လား၊ ပြီးတော့ မင်းတို့နှစ်ဦး သဘောတူဖွဲ့ထားတဲ့ ငါးဦးကော်မတီ ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်း လိုက်နာကြပေါ့။ မညီညွတ်ဘူးဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ညီညွတ်အောင် လုပ်ဖို့ကတော့ အလွယ်ကလေးပဲ၊ တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး တစ်ဖက်စကားနဲ့ အထင်လွဲ၊ ဟိုလုပ်ဒီလုပ်လုပ်ရင် ဘယ်တော့မျှ ညီညွတ်မှာ မဟုတ်ဘူး”
“ငါ့တော့ ဘာမျှ မနာလို မရှိကြနဲ့၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးလျှင် နိုင်ငံရေးက ထွက်မှာပဲ။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးလျှင် ဆွဲထားတာတောင် မနေဘူး၊ စကားများမနေကြနဲ့၊ ဒါပဲ…” ဟု ရယ်မောကာ ပြောဆိုအပြီး သူ့နေရာသို့ ပြန်၍ထိုင်နေ၏။
– See more at: http://news-eleven.com/%E1%80%B1%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%86%E1%80%94%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%9B%E1%80%AC%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7/%E1%80%84%E1%80%AB%E1%80%9F%E1%80%AC-%E1%80%90%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8-%E1%80%9E%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%AB#sthash.2xBOrJAn.dpuf
-လေးဖြူရဲ့ အဖေ(သီချင်း) ကို ၀ိုင်ဝိုင်းရဲ့ အဖေ (သီချင်း) ထက်ပိုကြိုက်တယ်ခည..
-အိုက်သီချင်း လိပ်ပြာ အယ်လ်ဘမ်မှာ ပါတယ်
တေးရေး မောင်မောင်ဇော်လတ်ရေးခဲ့တဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဦ သီချင်းပါ။ လေးဖြူရဲ့ လိပ်ပြာ အခွေထဲမှာပါပါတယ်။
အဖေ လို အားကိုးခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက် မရှိတော့တဲ့ ဘဝ မှာ ဘယ်လောက် ဖရိုဖရဲ ဖြစ်ခဲ့ မယ်ဆိုတာ။
ဒါပေမဲ့ သမီး တို့ အခက်အခဲတွေ ကျော်လာနိုင်ပြီဘဲ။
သူ သမီး အတွက် ဂုဏ်ယူမှာပါ။
်သူ့ ကိုရည်မှန်းပြီး ဆက်ပြီး မြင့်အောင် ကြိုးစားပါဦး။
လေးဖြူ ရဲ့ လိပ်ပြာ ကိုတော့ မသိတော့ဘူး။
ဒီ သီချင်း က အပိတ်ခံ ရလို့ ပေါက်လာတာ မို့ သိခဲ့တာ။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သမီး မို့ ချစ်တာ၊ ယုံကြည်ကိုးစားတာ မဟုတ်ကြပါဘူး။
အစ်မတို့ အားလုံး ရဲ့ ဖခင်ကြီး စိတ်ဓာတ် ကို လိုက်နင်း နေနိုင်တဲ့ သူ မို့ ချစ်တာ၊ ယုံကြည်ကိုးစားတာ ပါ မဟုတ်လား။
သီချင်းရေး ဆရာ ကို မောင်ကာကြီး ပြောလို့ ” မောင်မောင်ဇော်လတ်” လို့ သိလိုက်ခဲ့ပြီ။
ကိုအောင်ဆန်း ဆိုတဲ့ လူက တစ်ခြားသူ တစ်ချို့ လို ပုံသေကားချပ် ဒါမှဒါ အသေစွဲ တတ်သူ မဟုတ်ဘဲ
.ပြောင်းဖို့လိုရင် လိုလိုလား ပြောင်းတတ်သူ ဆိုတာ။
ဒါနဲ့ aungsan.com website ရဲ့ ဧည့်မှတ်တမ်းထဲ ရှင်တို့ အစ်ကိုကြီး ကိုမိုးသီး ရဲ့ နာမည် လဲ တွေ့တယ်။
ကြာတော့ကြာပါပြီ။ ၂၀၀၆ လောက်က လာဝင်ကြည့်သွားခဲ့တာထင်ရဲ့။
I want to throw few cents of my suggestions that is put more photo, his voice, documentary movies and comment of his friends and colleagues who are still alive.
I can give some of resources and link.
“ဘဝ ဒါဏ်ချက်များ အိမ်မက်မှာ
အမြဲမြင်ယောင် တမ်းတ မိတယ် အဖေ” ဆိုတဲ့ အပိုဒ် ကို တစ်အားကြိုက်တယ်။
ကိုယ့်အိမ်နေရာ ကနေ အဝေးထွက်နေရသူတိုင်း ဘဝ ဒါဏ်ချက်တွေ ရတာ၊ အိမ်မက်တွေ ပျက်ရတာ ကိုယ်တွေ့ဘဲ။
ဘယ်သူ့ အပြစ်ရယ်လို့ မလွှဲချချင်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ပြည် ကိုယ့်မြေ က နေ ဘယ်သူမှ တစ်ခြားနေရာမှာ မနေချင်ခဲ့ကြပါဘူး။
ကိုယ့်လိုဘဲ ဦးအောင်ဆန်း ခရေဇီကြီး ရှိနေတာ ရွာထဲ အဝင်ထဲ မှာ သိခဲ့သားဘဲ။
သူ့အကြောင်း တွေ ကတော့ ဖတ်ပြီး သားလဲ အထပ်ထပ်ပြန်ပြန်ဖတ် မညည်းတာမို့ ရှိသမျှ သိသမျှ အကုန်သာ မျှပါလေ။
သများ လဲ အကြောင်း ဖြေချင်လိုက်တာ။
မှားလို့ ဟောက်လဲ ဟောက်စမ်းပါစေ။
အရီးတို့ ဒီ ထွက်ပေါက် ကိုဘဲ အာရုံပြုပြီး တိုးထွက် ရမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ အနာဂါတ် ကို ဖြစ်ချင်တိုင်း ဖြစ်နေရင်ဖြင့် ဒုက္ခ ဆိုတာ ဘယ်ရှိပါ့မလဲ။ နော။
ဝိုင်ဝိုင်း ဆိုတာ လဲ နားထောင်ကြည့် လိုက်ပါဦးမယ်။
ဒါနဲ့ ရှင်ကလေး ဇာတ်လမ်းရော ဘယ်လိုလဲ။
လက်ပါပြီး သွားပြီလား။ ဆက်ရန် ရှိတော့ဘူးလား။
အရီး သိချင် နေတဲ့ သီချင်းရေးဆရာ ကို ပြောပြပေးလို့ အစိမ်းရောင်ချယ် လိုက်ပါရစေ။
အနုပညာ နဲ့ သတိရ တာတောင် မသိမသာ သီကုံးရတဲ့ အချိန် မှာ တောင် ဒီလို ရေးပြ ရဲခဲ့တဲ့ သူ နဲ့ သီဆို ခဲ့သူ ကို ဦးညွှတ် လိုက်ပါတယ်။
သီချင်းနားထောင် သူများရော၊ aungsan.com website ကို ဝင်ကြည့် သူများ အားလုံး ကိုပါ
သက်ဆိုင် သူများ ကိုယ်စား အထူးဘဲ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတော့ မြန်မာပြည်အတွက် ဘုရားပေးတဲ့ လက်ဆောင်လို့တောင် ပြောချင်တယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီလက်ဆောင်က အခုမရှိတော့ဘူး။
လွန်သွားမှ ပြန်မရနိုင်တာကို တမ်းတနေမှာထက် …….
လက်ရှိရှိနေတဲ့ ဒေါ်စုရဲ့တန်ဖိုး သိ/ထားဖို့လိုပါတယ်။
နတ်မောက်က ကိုအောင်ဆန်းရဲ့ အမေကြီး အမေစုက
ဂျူဗလီဟော အထိလိုက်သွားပြီး သူ့သားကိုသွားကြည့်
ပြီး အမေစုက ငိုတယ်
ငါ့ထက် နိုင်ငံရေးကို ပိုချစ်တဲ့ အောင်ဆန်းတဲ့
ငါ့ထက် ပြည်သူကို ပိုချစ်တဲ့ အောင်ဆန်းလို့ ပြောပြောပြီး ငိုတယ်
အမေစု ဂျူဗလီဟောက ပြန်လာအပြီး
လမ်းခုလတ်မှာ သတင်းထောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုညိုမြက
မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ပြုစုဖို့ ကိုညိုမြလူတွေနဲ့ အမေစုကို
ကိုညိုမြတို့ အဖွဲ့က အင်တာ ဗျူးပါလေရောဗျာ
အမေစုရဲ့ သားကိုအောင်ဆန်းက သူမကျဆုံးခင်မှာ
အမေစု အတွက် ဘာတွေများ ဝယ်ပေးသွားလည်းလို့
ကိုညိုမြကြီးလဲ မေးသာမေးနေတာ သူလည်းငိုနေရှာတယ်
ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးလ လောက်ကတော့ အမေ့ကို တစ်ခါမှ
ဘာမှ ဝယ်မပေးရသေးလို့ဆိုပြီး မင်းသူငယ်ချင်း
ကိုအောင်ဆန်းကြီးက ငါ့ကို ဝယ်ပေးသွားတယ်
ကိုအောင်ဆန်းက ငါ့အတွက်ဆိုပြီး သဘက် တစ်ထည်
ဝယ်ပေးသွားပါတယ် သားရယ် တဲ့
တစ်နိုင်ငံလုံးကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်က သူ့အမေ
အတွက် သဘက် တစ်ထည်တဲ့
ဗိုလ်ချုပ်ရာ နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေကို ဘာလို့မသုံးတာလဲ